WARARKA BARAAWEPOST Khamiis 24 november 2011
Taliyaha Ciidanka booliska soomaaliyeed oo maanta dib dalka ugu soo laabtay
Taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed Sareeye guuto Shariif Sheekhuna Maye ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu soo dhamaystay socdaalo shaqo ah oo uu ku tagay qaar ka mid ah dalalka caalamka iyo gobolo ka mid ah dalka Soomaaliya.
Taliyaha ayaa dalalkii uu tagay oo uu ka mid ahaa dalka Kenya ayaa muddadii uu joogay wuxuuhalkaa kulamo shaqo oo ah oo ku saabsan howlaha ciidanka iyo weliba helidda mushaharka ciidanka iyo qalabka kale ee ay ciidanku u baahan yihiin kula yeeshay magaalada Nairobi hayadaha UNDP iyo UNPOS.
Taliyaha ayaa sidoo kale intii uu halkaa joogay kulamao la yeeshay qaar ka mid ah madaxda iyo taliyayaasha ciidamada booliska ee qaar ka mid ah dalalka geeska Afrika.
General Shariif Sheekhuna ayaa sidoo kale ka mid ahaa wafdiga uu horkacayay ku xigeenka raiisal wasaaraha isla markaana ah wasiirka ganacsiga ee kormeerka shaqo ku tagay qeybo ka mid ah gobolada jubbooyinka gaar ahaana degmada Dhoobley.
Taliyaha iyo wafdigii uu la socday ayaa muddadii ay Dhoobley joogen waxay u kuurgaleen xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada Booliska e eka howlgala degaankaas iyo weliba xalladda nololeed ee ay ku sugan dadweynaha ku dhaqan degmada Dhoobley.
Taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed S/Guuto Shariif Sheekhuna Maye ayaa waxaa garoonka caalamiga ah ee Muqdisho ku soo dhoweeyay taliye xigeenka ciidanka booliska S/guuto Saacid iyo qaar ka mid ah taliyeyaasha hoggaanada iyo qeybaha kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Taliyaha ayaa sidoo kale isla maanta wuxuu kormeer shaqo ah ku tagay saldhiga booliiska ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde airport, isagoo halkaas war bixin kaga dhageystay taliyaha saldhigaas Col Ahmed Maxamed Cali (Gaalkacyo) waxaana halkaas ka socotay howlo diiwaan gelin ah oo lagu sameynayay ciidanka Booliska Soomaaliyeed kuwaasoo lagu diiwaan gelinaya qalab komputer ah oo loogu talagalay diiwaangelinta,magaca sawirka iyo faraha askari kasta o oka tirsan.
Taliyaha ayaa waxaa loo sheegay in wixii maanta ka dambeeya ay ciidanka Booliska soomaaliyeed yeelanayaan Data Base lagu diiwaangeliyo ciidanka oo dhan iyo howlaha kala duwan ee ciidanku qabto.
Booqaashadaas gaaban kadib wuxuu General Shariif Sheekhuna halkaas uga sii gudbay xarunta madaxtooyada ee villa somalia halkaasoo saacadaha soo socda uu kulan warbixin ah kula yeelanayo madaxda sare ee qaranka.